Drama, Essays.. » တောရွာဓလေ့မို့ပျော်မွေ့တယ်တော်ရေ့	41
(သွား ခီညားတို့လည်းနောက်တစ်ပိုင်းမှ ဆက်ဖတ်ဂျ) About ဗုံဗုံ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မိဗုံတို့များ အမြင်​မ​တော်​ ဂါဇီ​လော်​နဲ့အီးယားဖုန်းလုပ်​ချင်​​သေး
ဗုံဗုံ says: ဟွန်း…အားပေးမယ့်လူကအဆင်သင့်
ဖက်ဖူးအုပ်မကိုင်တာဘဲဟာဂို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အဲ့ကစ မှားတာ ပြာချက်​
ဗုံဗုံ says: ဘုံလေးအိမ်ထောင်ပုတော့
ဘာမွှားလို့ဒုန်း..ဟွန်း..ဟွန်း… Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အရင်ကတော့ ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင်ဆိုတာပဲ ကြားဖူးတာ။
လိုက်လည်းလိုက်တဲ့ ဒီမြေးအဖိုး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အာတီမမလိုဆိုရင်ဖက်ဖူးအုပ်
ဒီတခါအလှုကျရင်သများပြောပေးမယ် အဖိုးကို…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: တရွာတည်းနေ တရေတည်းသောက်တွေဆိုတော့….
အောင်ကျော်နဲ့ပုဆိန်တံဆိပ်က တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နေအုံးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: ရွာ​တွေမှာလုပ်​တဲ့အလှူပွဲက ဟင်း​တွေအရမ်းကြိုက်​ပဲ…. ဗုံတလုံးမင်​ဂါ​ဆောင်​ရင်​ဖိတ်​ပါ… ခိခိ… အဖိုးခိုင်းနှိုင်းပုံ​လေးကလည်းမိုက်​ပါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: သူ့မယ်လည်း ဘာရေးရေး
ငှက်ပျောပင်အရုံလိုက် ကိုင်ရလောက်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: သေချာတယ် ဒါ ဖက်စိမ်းကွမ်းတောင်ကိုပြောတာ
ဗုံဗုံ says: အေး.. သဂျားကမှကိုင်ဖူးသေး.. အဲ..သိသေး..ဟုတ်တယ်ဟ
black chaw says: နောက်တစ်ပိုင်း ရှိသေးတဲ့ သဘောလား ဟမ် ????
ဗုံဗုံ says: အံမာ ရန်စသလား
ပုန်ဏားဖြူ ပုန်နားညို လုပ်လို့ရသယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အမ်မလေးးး
ဗုံဗုံ says: ​တွေ့လားရွာမ​ရောက်​​သေးဘူး
naywoon ni says: အလှူဟင်းစားချင်​လို့ တစ်​ပိဿာ ​လောက်​၀ယ်​ပြီး လူကြုံနဲ့ ပို့​ပေးမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ၀ယ်​စရာလိုပါဘူး ဘနီရယ်​
​နေတဲ့အပိုဂျီးရှိဒယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အမ​လေး အူး​လေးခင်​​ဇော်​လာလို့က​တော့
Kaung Kin Pyar says: ရွာအလှူပွဲက ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား….။ ကလေးဘ၀က တစ်ခါကြုံဖူးတယ်….။ ရေခပ်သူခပ်၊ ထင်းပေါက်သူပေါက်၊ ကြက်သွန်ခွာသူခွာ…ပျော်စရာပ….။
ဗုံဗုံ says: မပူနဲ့ကင်း​ကောင်​​လေး
အလှု့ဒကာသာရှာ​ပေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အားမလျှော့ပါနဲ့ကွယ်
မန္တလေးမယ် ထုံအအ တောသူဋ္ဌေးတွေပြည့်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ​လျော့ဝူး ​တေဒါ​တောင်​
​ကောင်း​ကောင်းရှိဒယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: သရက်ခြံပိုင်ရှင်နဲ့ အခြေအနေဘယ်လိုဒုံး တူမရေး..
တူမလေးကို သရက်ခြံပို့ပီး လယ်တွေနွားဒွေအကုန်သိမ်းပစ်မယ်… နာကွ ဒေါ်လေးလောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ဒမာ ဂျားဝီး တညားအူး​လေးကိုလိုချင်​ရင်​
ကြွက်​​တွေပါ အကုန်​ထည့်​​ပေးလိုက်​မှာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: လယ်တွေ၊ နွားတွေရမယ်ဆိုလို့ကတော့ ဖက်ဖူးတင်မက ငှက်ပြောတပင်လုံးကိုင်ပလိုက်မာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: သဗုံမ ခါးပုံစ နယုန်လ ဂဠုန်ထ ..
ဗုံဗုံ says: ဒီတခါအလှုကို ​ကြောင်​သားနဲ့​ကျွေးမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ်အဖေတို့ အရပ်မှာတော့ အလှုရှိရင် ဖိတ်စရာမလိုဘူး…
ဗုံဗုံ says: အမ​ရေး ဥဥ​ကျောက်​ရဲ့
ကုသိုလ်​တပဲ ငရဲတပိသာ အဲ့ အဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: “ အံမာဗျာ.. နင့်လိုကဆုန်စိုင်းပြီး တစ်ရွာလုံးမီးနဲ့တက်ရှို့နေတဲ့သူက .. ကိုင်ရလိမ့်မယ် ဖက်ဖူးအုပ်ကြီး.. မတန်မရာ..အောင်နက်နဲ့အော်ဒီကလုံး “ တဲ့… .အောင်နက်နဲ့အော်ဒီကလုံး ..တဲ့ ။။။။
ခွိ… အဲ့ဂလောက် ထိမိ တဲ့ တင်စားချက်လေး..ပြောတတ်တာကို သဘောကျချက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: သ​ဘောကျရင်​ နင်​ ငါ့အဘိုး
ယူလိုက်​ပါ့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: .ယူမယ် … ခေါင်(ဂေါင်) ထိ အကုန် စားမှာနော်… ဒါနဲ့ နိ အဖိုးက…ဖွေးဖွေးနဲ့တူရဲ့လား…
နီ့ လို ဒေါ်ဖွားမေ ပုံစံပဲလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: နင့်​လိုဘဲ​လေတခြမ်းဖြတ်​ပြီး
Alinsett@Maung Thura says: နာက သန်တုန်း မှန်တုန်းပါဟ
အူးစည် says: တောသူဌေး ကွန်မြူနစ်ခေတ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်သူဌေး ရွာသူဗုံကြီး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟိ… မျိုးရိုးမကောင်းလို့လား ဆိုတဲ့နေရာအရောက် ရယ်ရတာ အသံတောင်ထွက်တယ်.. ဖက်ဖူးအုပ်ဆိုတာကို အမျိုးသမီးများနေ့ပွဲ တီဗီမှာပြတော့ မြင်ဖူးတယ်… စကားအတင်းစပ် သများလည်း ကွမ်းတောင်ကိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်သိလား.. ၂ ခါတောင်.. လက်ကိုင်ပုဝါလေးနဲ့ လာဖိတ်တာ.. ဟိဟိ… ဘလိုင်းကြီးကြွားခြင်း.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ကွမ်းတောင်ကိုင်ပြီးပြီဆိုတော့
ယောက်ဂျားယူလို့ရဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .ရွာ့အလှူ လေးပေါ်အောင်ရေး
.ဖိတ်ပါမနှေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ကိုယ့်ယောက်ခမွ
ထင်းပေါက်ရအောင် ဖိတ်ရမှာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အရေးအသား ကောင်းချက်..မျက်စိထဲမှာ မြင်လာတယ်..
..ငါးခြောက်ထောင်းကြော်ပန်းကန်ကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: မမပြာ
သွေးတွေတိုးနေအူးမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.